Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Nigeria Josh Maja Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Josh Maja Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na mkpuru osisi, anyị na-egosiputa akụkọ ihe mere eme nke ndị London ọkachamara na Nigeria. Akụkọ anyị malitere site n'oge ọ bụ ruo mgbe ọ rụzuru ọrụ Fulham. Iji mee ka odighi ihe omuma gi banyere ihe banyere Josh Maja's Bio, lee uzo oru ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere akụkọ ifo ya bidoro biri na Premier League - ebe o meriri ihe mgbaru ọsọ abụọ mbụ ya na mmeri 2-0 megide Everton. N'agbanyeghị otuto a, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara banyere akụkọ ndụ Josh Maja. N'ihu n'ihu, ka ịmalite.
Akụkọ banyere nwatakịrị Josh Maja:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha Josh Magic. Aha - Josh bụ naanị aha njirimara na ezigbo aha ya bụ - Joshua Erowoli Orisunmihare Oluwaseun Maja. A mụrụ ọkachamara na ịgba bọọlụ na 27th ụbọchị Disemba 1998 na nna na nne Naijiria, na London Borough nke Lewisham.
Josh Maja ji oge nwata ya bụ Pimlico, ebe obibi na Westminster. Ya na ụmụnne ya nwoke toro, nne na nna ya (ọkachasị nne ya) na nwanne nwanyị. Ndị a ma ama n'etiti ụmụnne ya bụ Emmanuel na Jeremiah Maja - ha abụọ sere foto ebe a.
Zute Brothersmụnna Josh Maja - Emmanuel Maja (Aka nri) na Jeremiah Maja (N'aka ekpe).
N'ịtụle ụzọ ụmụ nwoke a si gbaa bọọlụ n'oge ha ka dị obere, enweghị ihe ọ bụla tụrụ aro na ha agaghị etolite wee bụrụ kpakpando bọọlụ - nke ha mere.
Ezinụlọ Josh Maja:
A mụrụ onye Naijiria na Longon na nne na nna Nigeria na-ebi ndụ ma nwee nkasi obi dịka ụmụ amaala Bekee. A zụlitere Josh na ogbenye. Ndị mụrụ ya dị ka ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ, na-enweghị nsogbu na ego ma nwee ezigbo agụmakwụkwọ gbasara ego.
Ezigbo ezinụlọ Josh Maja:
N'agbanyeghị eziokwu a mụrụ ya ma tolite na England, onye obodo London nwere ekele maka mgbọrọgwụ ya nke Nigeria. Site na ịrị elu ya, ọtụtụ ndị agba agba ajụla… Ebee ka ndị nne na nna Josh Maja si bịa?
Ihe mbu bu na o nwere aha Yoruba abuo - (Orisunmihare na Oluwaseun). Mgbe nyochachara kpụ ọkụ n'ọnụ, anyị nwere ike ịchọta aha ya (Orisunmi) na Ondo State, Nigeria. Ikekwe, ebe a ka papa Josh Maja si.
Aha (Orisunmi) nwere steeti Ondo. Ọ dị ka nne na nna Josh Maja (papa ya) si Ondo steeti, Nigeria.
Ozo - uzo nke mmalite ya - anyi huru aha ozo - Erowoli. Aha a na-ewu ewu maka ndị si Warri, Delta steeti. Maka nke a, anyị nwere ike ịkọ nkọ nke ukwuu, na mama Josh Maja si Delta steeti, Nigeria. Ọ dị ka nne na nna ya hapụrụ Nigeria gaa England na 1990 iji mee ka ezinụlọ ka mma.
N'ịdabere na Independent, Josh Maja's nwere aka na agụmakwụkwọ tupu ịpụta ọrụ ya. Akwụkwọ akụkọ Britain kwukwara na ọ gakwara ụlọ akwụkwọ ọbụna n'oge ọ dị afọ iri na ụma.
Na-abịa site na ụlọ ndị Naijiria bụ ndị a maara na-ejide ụkpụrụ dị elu maka Mmụta maka ụmụ ha, o doro anya na ịghọ ihe ọzọ ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ọrụ ọkachamara anaghị arụ ọrụ dị ka atụmatụ.
Josh Maja Football Akụkọ:
Dị ka Wikipedia ya si tinye ya, ndị nne na nna na-eto eto, mgbe a mụrụ ya, hapụrụ Lewisham ka ha biri na Pimlico nke dị na Greater London. N'ihi ya, ọ bụ n'etiti London na City of Westminster ka Josh na ụmụnne ya - Jeremaya, Emmanual (et al) mee ka nkà ịgba bọọlụ ha sie ike.
N'inwe mkpebi siri ike iji mee ka nrọ ya mezuo, Josh gara n'ihu ịnwale ule na Crystal Palace na Fulham. Na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị a dị na London, kpakpando ahụ malitere ịtọ ntọala dị mma maka ọrụ ntorobịa ya.
Ezigbo mkpa ịbawanye ahụmịhe ntorobịa karịa London hụrụ nwatakịrị mara mma nke na-aga northwest England (Manchester) maka ule na City. N'ịbụ onye ọ joyụ nke ezinụlọ ya, Josh gafere ma sonyere ndị dị ka Jadon Sancho onye na-egwuri egwu n'ebe ahụ.
Josh na-egwuri egwu maka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ obodo Manchester na-enwe olileanya dị ukwuu na ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ya akwụkwọ. N'ụzọ dị mwute, ha emeghị ya ma mgbe ọ gwasịrị ndị mụrụ ya okwu, kpakpando ahụ na-eto eto hapụrụ ụlọ akwụkwọ kachasị mma na England na Sunderland. N'ebe ahụ, o nwetara ihe ọ chọrọ - agụmakwụkwọ afọ abụọ.
Josh Maja Biography - tozọ a ma ama Akụkọ:
Septemba 2016 tụgharịrị bụrụ otu afọ ọ nwetara ọmarịcha bọọlụ na Black Cats. Dị ka a tụrụ anya ya, ọ biliri na mgbaasị, na-etinye nnukwu ọgwụ nke ụdị ọgụ ya. Josh bụ onye dị umeala n'obi nke mụtara ihe site na ọkpọ egwu - dị ka Jamine Defoe - onye ọ weere dị ka ihe nlereanya. Lee, nwatakịrị ahụ na-enweta ihe mmụta dị egwu site na arụsị ya.
Ka Jamine Defoe hapụrụ Sunderland, Josh Maja ghọrọ onye ọkacha mmasị iweghara ọnọdụ ya. bụrụ onye a gọziri site na njikwa na njigide nke ndị iro gara aga, nnukwu nwa ahụ meriri ihe mgbaru ọsọ 16 tupu a kwụọ ya ọnụ na France. N'okpuru ebe a bụ vidiyo nke ụbọchị ya dị ebube na Sunderland ebe ọ na-egwuri egwu na mpako.
Josh Maja Biography - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
N'ụbọchị nke iri abụọ na isii nke Jenụwarị 26, onye Sunderland na-aga n'ihu banye na Bordeaux nke French Ligue 2019 na nkwekọrịta afọ anọ na ọkara na a aggwọ dị egwu na-akwụ ụgwọ - € 65,000-otu izu. Na-egwu egwu n'akụkụ Yacine Adli, Josh ghọrọ Les Girondins ozugbo.
N'ịbụ onye na-agbago na bọlbụ bọlbụ, Ime Anwansi Joshua (dị ka a hụrụ na vidiyo nke ihe mgbaru ọsọ Bordeaux ya) ghọrọ otu n'ime ihe ndị na-eto eto kachasị mma na French. O ritere ihe nrite kacha enye goolu na klọb maka oge 2019-2020 ọ bụ nkwụsị n'ihi ọrịa coronavirus.
N'ihi eziokwu ahụ bụ na ndị mụrụ ya bụ ndị Naịjirịa, onye nchịkwa bọọlụ mba ahụ, Gernot Rohr, zobere Maja ngwa ngwa. Ebumnuche ya bụ ịkwalite asọmpi maka Victor Osimhen, dị ka otu n'ime ndị ọrụ ọkacha mmasị nke mba ahụ.
Na mbido 2021, kpakpando ahụ na-eto eto kpọtụrụ ezinụlọ ya na enwere ike ịlaghachi England. Oge a, ọ chere na ọdịnihu ya ga-agwa ya na ọ ga-aga nke ọma na Premier League. Na 1 February 2021, nyefe ụbọchị njedebe, Josh laghachiri England na ụlọ mbụ ya, Fulham.
Valentbọchị Valentine-ụbọchị nke iri na anọ nke ọnwa Febrụwarị 14 bụ ụbọchị enyere ka ọ bụrụ ebe akara aka ya. N'ụbọchị ahụ, ọ nwetara mmalite mmalite, na-atụle ihe mgbaru ọsọ abụọ (Video dị n'okpuru) na mmalite ya iji merie Everton.
Obi abụọ adịghị ya, ụwa nwere ike ịnọ na njedebe nke ịhụ nsụgharị Fulham ka mma Alekandar Mitrovic, bụ onye na-eto eto, nke England jụrụ n'oge gara aga ma ugbu a na-eto eto iji ghọọ ọkwá zuru ụwa ọnụ, n'ihu anya anyị. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Onye bụ Nwanyị Josh Maja:
You nọ ebe a inweta ozi gbasara onye egwu bọọlụ Naịjirịa n'ịhụnanya? Have nwere agụụ na-agụsi ike ịchọpụta onye bụ enyi nwanyị Josh Maja?… Otu a ka Lifebogger dị. N'eziokwu niile, anyị enyochaala ebe niile, ọ nweghị akara ngosipụta WAG.
Mata enyi nwanyị Josh Maja.
N'ime obi anyị, anyị kwenyere na Josh Maja na-eso onye ọ bụla akpakọrịta. N'ihi ya, ọ bụ naanị oge tupu ndụ onwe ya aga n'ihu ọha. Ma bia chee echiche banyere ya,… Ọ bụrụ na onye dị ka ya dị nkọ n'ihu ihe mgbaru ọsọ, ọ nweghị nsogbu isi na njikwa okwu nzuzo.
Maja bụ Capricorn, ihe ịrịba ama nke na-anọchite anya oge na ibu ọrụ. Ọganihu Nigeria bụ onye nwere ọnọdụ nke nnwere onwe nke na-enyere ọganihu dị ukwuu ma na ndụ ya na nke ọkachamara.
Josh Maja Web site Web:
Na-aza ajụjụ banyere otu o si eji his 60,000 Fulham akwụ ụgwọ kwa izu, onye na-eti ihe na Nigeria kwetara na ọ naghị ebi ndụ dị oke egwu. Maja nwere obere akwụkwọ akụkọ na-egbuke egbuke ma ọ nweghị ihe ndị dị ka igosi ụgbọ ala ndị mara mma, nnukwu ụlọ (mansions) ụmụ agbọghọ, uzu wdg.
Josh Maja Ndụ Ezinụlọ:
Ọhụụ bụ ịhụ ihe a na-ahụta ka ọtụtụ ndị anaghị eme eme. Maja sitere na ezinụlọ egwuregwu na-enwe ọhụụ maka egwuregwu ahụ. N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị ntakịrị banyere mmezu ya.
Banyere ndị nne na nna Josh Maja:
Ha zụlitere ụmụ nwoke anọ na otu nwanyị. Ime ya na umunne ya ka ha buru ndi n’egbo boolu bu otu n’ime ezigbo mkpebi Josh Mama na Papa mere. Ndị na-agba bọọlụ na-agba bọọlụ bụ n'ihi ndị mụrụ ya mere ka ọ daa. Ọ bụ ezie na obere akwụkwọ dị ha, ọ bụ naanị oge tupu ha emee ka ọha mmadụ mara.
Banyere ụmụnne Josh Maja:
N'ime ụwa football nke oge a nke ụgbọ ala na-ahụ maka mgbasa ozi na usoro mgbasa ozi ọha na eze, ụmụnne bọọlụ na-anọchite anya ọgwụgwọ na-enye ume ọhụrụ.
Emmanuel Maja bụ onye na-ejide onye na-eme egwuregwu na-anwale ule na obodo Man na-egwu egwu na FC Croydon ka m na-ede Bio. N'aka nke ọzọ, nwanne ya nwoke nke okenye, Jeremaịa Majas na-aga n'ihu - yana anya maka ihe mgbaru ọsọ - dị ka Josh ya.
Josh Maja Eziokwu Eziokwu:
N'ịkọkọtara anyị ihe ncheta anyị gbasara ndị egwuregwu bọọlụ Naịjirịa, anyị ga-eji ngalaba a gwa gị eziokwu ndị ọzọ gbasara ya. Na-enweghị nnukwu ado, hapụ ka ịmalite.
Eziokwu # 1 - Josh Maja Fulham rygwọ ọnwa:
Onye nwe Sunderland Stewart Donald kpughere Maja na-akwụ £ 1000 kwa izu. Dabere na weebụsaịtị French L'Equipe, ọ naara € 65,000-a-izu na Bordeaux. Movekwaga Fulham ahụwo ịkwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ ruo. 60,000.
FULHAM ALLỌ EGO
Kwa Afọ: £ 3,124,800
Ọnwa kwa: £ 260,400
Kwa Izu £ 60,000
Kwa :bọchị: £ 8,571
Kwa elekere: £ 357
Nkeji nkeji: £ 6
Kwa Nke Abụọ: £ 0.09
Kemgbe ị malitere ilele Josh Maja'Bio, nke a bụ ihe ya na Fulham rụzuru.
Onye Londoner na-akwụ ụgwọ 37,000 ga-arụ ọrụ maka afọ 84 iji mee ụgwọ ọnwa Maja na Fulham kwa afọ.
Eziokwu # 2 - Okpukpe Josh Maja:
You ma na aha ya bụ Joshua? Nke a bụ aha Akwụkwọ Nsọ nke pụtara - 'Chukwu bu Nzoputa m'. N'ihi ya, ọ dịghị agọnarị eziokwu ahụ bụ na ndị nne na nna Josh Maja ebuliteghị ya dịka Onye Kraịst. N'ezie, akụkụ nke Striker's Instagram Bio na-ekwu ya niile. Ọ na-agụ; Chineke kachasị ihe nile.
Eziokwu # 3 - Ọnye na-bụ Josh Maja Agent?
Elite Project Group Limited na-achịkwa onye na-akụ egwu Nigeria. Onye kachasị nke ndị ahịa ụlọ ọrụ ahụ kachasị bụrụ ndị na-agba ọsọ ojii. Themfọdụ n’ime ha bụ Alex Iwobi, Jadon Sancho, Bukayo Saka, Eddie Nketiah, Folarin Balogun, Reiss Nelson. Elite Project Group na-ejikwa Todd Cantwell.
Eziokwu # 4 - Josh Maja Net thtọ:
Ihe omuma ego dika otutu omuma ya, ugwo oru ya na otutu oge ahutawo otutu uru nke ihe ndi ozo. Na mmiri a, anyị na-atụle networth nke Maja ka ọ bụrụ ihe ruru to 2 nde.
Eziokwu # 5 - Josh Maja FIFA stats:
Mgbe ị lere ihe mgbaru ọsọ ya anya na usoro nke vidiyo ya n'elu, ị ga-ekwenye na m na o kwesịrị isi ihe ndị ọzọ. Site na mmalite mmalite ya na Premier League, o doro anya na FIFA ga-echeta ya na mmelite ndị sochirinụ.
Iji chịkọta Memoir a, anyị mepụtara tebụl a nke na-aza ajụjụ niile metụtara ajụjụ ndị metụtara biographical gbasara Josh Maja.
Aha zuru ezu: Joshua Erowoli Orisunmihare Oluwaseun Maja
aha otutu: Josh na Ime Anwansi
Ụbọchị ọmụmụ: 27 nke Disemba, 1998
Ebe amụrụ onye: Lewisham, England
Ihe Banyere Ezinaụlọ: Nigeria
Ndị nne na nna: South West Nigeria
Ụmụnne: Brothersmụnna nwoke atọ na Otu Nwanne
Ụmụnna: Emmanuel Maja, Jeremiah Maja wdg.
Ezigbo Net: £ 2 nde
Egwuregwu Ọnọdụ: Gaanụ n'ihu / ọkpọka
elu 5 ụkwụ 11 sentimita asatọ OR 1.80 mita.
Hnọgidesi ike n'ọchịchọ nke inweta bọlbụ bọlbụ na-akọwa Josh Maja - onye kachasị nwee ọganihu n'etiti ụmụnne ya nwoke na-agba bọl Dị ka Patrick Bamford, ọ bụ ụdị na-ahọrọ ịrụ ọrụ nke ọma na pitch. Ihe mgbaru ọsọ ndị e nyere na mmalite nke ndụ ya na Premier League na-ekwu ya niile.
Na nkenke, ọ dịghị nnukwu obi ụtọ na inwe ezinụlọ na-aga nke ọma nke ibi ndụ ya dabere na egwuregwu mara mma. Ọ bụ ezie na ndị England jụrụ ya, Maja (site na nne na nna) nwetara ụzọ maka ndị otu mba Nigeria ebe e mere ka ihe ịga nke ọma ya sie ike.
Daalụ maka iwepụta oge oge gụọ akụkọ anyị na Josh Maja. Jiri nlezianya mee ka anyị mara ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị mma na akụkọ ndụ profaịlụ anyị. Ma ọ bụghị ya, ka anyị mara na ngalaba nkọwa, ihe ị chere banyere Ime Anwansi Joshua.
Bọchị agbanweela: Machị 24, 2021
Bọchị agbanwee: Disemba 22, 2020